NeptuneClassic စျေး - အွန်လိုင်း NTCC ပွောငျး
စျေးနှုန်းနှင့် ပွောငျး ကို NeptuneClassic (NTCC)
သငျသညျ (ကစျေးနှုန်းအရ) ပွောငျး လိုအပ်နေသောကြောင့်သင်ဒီမှာဖြစ်ကောင်းဖြစ်ကြ NeptuneClassic (NTCC) နိုင်ငံခြားငွေကြေးသို့မဟုတ်အွန်လိုင်း cryptocurrencies မှ. ထက်ပိုမိုပြောင်းလဲနိုင်ဖို့ထက်ပိုမိုလွယ်ကူဘာမှမရှိဘူး 170 ငွေကြေး နှင့် 2500 cryptocurrencies ဤတွင်, အွန်လိုင်းကျွန်တော်တို့ရဲ့ငွေကြေး ပွောငျး ကိုသင်အခုလုပ်ကူညီပေးပါမည်။ မရင့်ပြောင်းလဲဖို့အခမဲ့ခံစားရ NeptuneClassic ဒါပေမယ့်လည်းမဆိုအခြားရရှိနိုင်ငွေကြေး။
သငျသညျမှာအားလုံးကြည့်ရှုရန်အဘို့အဖြစ်ကောင်းဖြစ်နိုင်ပါကစိတ်ဝင်စားဖို့ဖြစ်လိမ့်မည် လဲလှယ်၏နှုန်းထားများ NeptuneClassic တဦးတည်းစာမျက်နှာပေါ်တွင်.
NeptuneClassic များ၏စျေးနှုန်းများ ကမ္ဘာ့အဓိကငွေကြေး
NeptuneClassicNTCC သို့ အမေရိကန် ဒေါ်လာUSD$0.00739NeptuneClassicNTCC သို့ ယူရိုEUR€0.00624NeptuneClassicNTCC သို့ ဗြိတိသျှ ပေါင်GBP£0.00565NeptuneClassicNTCC သို့ ဆွစ် ဖရန့်CHFSFr.0.00672NeptuneClassicNTCC သို့ နော်ဝေ ခရိုဏာNOKkr0.0657NeptuneClassicNTCC သို့ ဒိန်းမတ် ခရိုဏာDKKkr.0.0465NeptuneClassicNTCC သို့ ချက်ခိုရိုနာCZKKč0.163NeptuneClassicNTCC သို့ ပိုလန်ဇလော့တီPLNzł0.0275NeptuneClassicNTCC သို့ ကနေဒါ ဒေါ်လာCAD$0.00977NeptuneClassicNTCC သို့ ဩစတြေးလျ ဒေါ်လာAUD$0.0103NeptuneClassicNTCC သို့ မက္ကဆီကို ပီဆိုMXNMex$0.165NeptuneClassicNTCC သို့ ဟောင်ကောင် ဒေါ်လာHKDHK$0.0572NeptuneClassicNTCC သို့ ဘရာဇီး ရီးယဲBRLR$0.0402NeptuneClassicNTCC သို့ အိန္ဒိယ ရူပီးINR₹0.553NeptuneClassicNTCC သို့ ပါကစ္စတန် ရူပီးPKRRe.1.24NeptuneClassicNTCC သို့ စင်္ကာပူ ဒေါ်လာSGDS$0.0101NeptuneClassicNTCC သို့ နယူးဇီလန် ဒေါ်လာNZD$0.0113NeptuneClassicNTCC သို့ ထိုင်းဘတ်THB฿0.229NeptuneClassicNTCC သို့ တရုတ် ယွမ်CNY¥0.0513NeptuneClassicNTCC သို့ ဂျပန်ယန်းJPY¥0.789NeptuneClassicNTCC သို့ တောင်ကိုရီးယား ဝမ်KRW₩8.75NeptuneClassicNTCC သို့ နိုင်ဂျီးရီးယားနိုင်းရာNGN₦2.84NeptuneClassicNTCC သို့ ရုရှ ရူဘယ်RUB₽0.543NeptuneClassicNTCC သို့ ယူကရိန်း ဟီရီဗင်းညားUAH₴0.203
NeptuneClassicNTCC သို့ BitcoinBTC0.0000006 NeptuneClassicNTCC သို့ EthereumETH0.00002 NeptuneClassicNTCC သို့ LitecoinLTC0.000136 NeptuneClassicNTCC သို့ DigitalCashDASH0.00008 NeptuneClassicNTCC သို့ MoneroXMR0.00008 NeptuneClassicNTCC သို့ NxtNXT0.576 NeptuneClassicNTCC သို့ Ethereum ClassicETC0.00109 NeptuneClassicNTCC သို့ DogecoinDOGE2.13 NeptuneClassicNTCC သို့ ZCashZEC0.00009 NeptuneClassicNTCC သို့ BitsharesBTS0.228 NeptuneClassicNTCC သို့ DigiByteDGB0.236 NeptuneClassicNTCC သို့ RippleXRP0.0262 NeptuneClassicNTCC သို့ BitcoinDarkBTCD0.000255 NeptuneClassicNTCC သို့ PeerCoinPPC0.0245 NeptuneClassicNTCC သို့ CraigsCoinCRAIG3.37 NeptuneClassicNTCC သို့ BitstakeXBS0.315 NeptuneClassicNTCC သို့ PayCoinXPY0.129 NeptuneClassicNTCC သို့ ProsperCoinPRC0.927 NeptuneClassicNTCC သို့ YbCoinYBC0.000004 NeptuneClassicNTCC သို့ DarkKushDANK2.37 NeptuneClassicNTCC သို့ GiveCoinGIVE16 NeptuneClassicNTCC သို့ KoboCoinKOBO1.68 NeptuneClassicNTCC သို့ DarkTokenDT0.0068 NeptuneClassicNTCC သို့ CETUS CoinCETI21.34